Soo dejisan Camfrog 5.0.5007 – Android – Vessoft
Camfrog – software ah isgaarsiinta video iyo is-dhaafsiga fariin qoraal ah oo u dhexeeya dadka isticmaala ee dalal kala duwan. Camfrog ogolaanayo inaad la xiriirto in hab ka mid ah muuqaal ah, faylasha beddelkeeda, hadiyado dalwaddii, ku dar users liiska saaxiib ah, iwm software wuxuu hubinayaa a isgaarsiinta tayo sare leh oo cad video images inta lagu jiro wada hadalka. Camfrog ku jira qolal badan oo loogu talagalay wada xiriirka kala qaybiyey koox koox ah dalalka, danaha iyo noocyada dhaqdhaqaaqa. Camfrog sidoo kale awood u ah in la abuuro qolkaaga chat gaar ah la sirta ah inay la soo wareegto ama xayiraad kale.
-Tayada sare ee xidhiidhka video
Gaarka ah iyo kooxda video chat
Qolal badan oo loo qaybiyey dal iyo danaha
Waxay abuurtaa aad qolka u gaar ah
Camfrog Software la xiriira: